DeviceRank: Ny vidin'ny fametrahana apetraka amin'ny finday sy ny fanaovana hosoka | Martech Zone
DeviceRank: Ny vidin'ny apetraka amin'ny finday sy ny hosoka amin'ny fifampiraharahana
Alakamisy, Septambra 22, 2016 Asabotsy 13 Febroary 2021 Adam Small
Ny orinasa dia manambola vola be amin'ny fampandrosoana ny finday. Na aiza na aiza avo ny tsatoka dia toa manaraka ny hosoka. Araka ny tatitra vaovao iray avy any DeviceRank, Fampiharana finday sy fametrahana hosoka amin'ny finday dia mitentina 350 tapitrisa dolara hatramin'ny 2016
AppsFlyer ny State of Mobile App Fametrahana & Fametahana hosoka dia mifototra amin'ny teknolojia DeviceRank ™ an'ny orinasa - ny vahaolana fisorohana hosoka voalohany amin'ny indostria hamantarana sy hanilihana ny hosoka amin'ny haavon'ny fitaovana –ary mandrakotra fitaovana 500 tapitrisa.
Ampidino ny fandalinana AppsFlyer
Io vinavina io dia mifototra amin'ny hetsika sandoka samy hafa, sady voamarina no ahiahiana:
Fanararaotana diso ny angon-drakitra fanodinana hosoka.
Fametrahana voaloa avy amin'ny fitaovana hosoka.
Hetsika an-tserasera hosoka sy simika.
Targetalike Lookalike sy famerenam-bidy.
Raha ny ara-jeografika, ireo firenena manana taha ambony indrindra amin'ny fametahana fampiharana sy fanaovana hosoka amin'ny doka, rehefa mizaka ny zon'ny mpamorona finday dia i Alemana, Aostralia, Sina, Kanada ary UK, arahin'i Etazonia, Rosia ary Frantsa. Mampiseho ny fikarohana fa manandrana mikendry firenena manokana ny mpisoloky arakaraka ny mety ho tambin-karama azon'izy ireo amin'ny fanaovana hosoka ny toerana misy azy ireo hanao hosoka.
Ireo firenena manana ny fandoavam-bola avo lenta sy avo lenta indrindra dia manana taha ambony noho ny hosoka, raha toa kosa ny faritra somary ambany ny karamany - ao anatin'izany i Indonezia, India, Brezila, Vietnam, ary Thailandy dia ambany ny tahan'ny hosoka.
Momba ny DeviceRank
DeviceRank no teknolojia fisandohana fampiharana finday voalohany hamantarana sy hisorohana ny fisolokiana eo amin'ny sehatry ny fitaovana. Ity teknolojia tsy manam-paharoa ity dia mampiasa ny fandrosoana farany amin'ny angon-drakitra lehibe sy ny fianarana milina mba hanomezana fiarovana 3x ka hatramin'ny 12x tsaratsara kokoa noho ny vahaolana mahazatra amin'ny indostria.
Araka ny hitantsika tamin'ny fianarantsika manerantany, ireo mpisoloky sy mpisoloky dia miha-mandroso hatrany, mamitaka ny mpanao dokam-barotra handoa vola amin'ny fametrahana na amin'ny firotsahana anaty fampiharana. DeviceRank dia manana fomba hafa tanteraka, manapaka ny hosoka amin'ny loharano ary manampy mangarahara amin'ny indostria mba hiarovana ny mpanao dokam-barotra, ny mpiara-miombon'antoka amintsika ary ny tsena iray manontolo. Oren Kaniel, mpiara-manorina ary tale jeneralin'ny AppsFlyer.
Rindrambaiko Fitaovana AppsFlyer'sTM ny teknolojia dia miasa mitovy amin'ny Score Credit, mamantatra ny fihetsika mampiahiahy ary manome fiarovana nohatsaraina. Izy io dia mampiasa algorithm manan-kery entin'ny data manan-kery hananganana isa tsy voatonona anarana, isa marimaritra iraisan'ny finday rehetra.
Ny fitaovana tsirairay dia isaina amin'ny refy avy amin'ny C (hosoka), amin'ny alàlan'ny B, A, AA ary AAA. Ireo fitaovana miaraka amin'ny naoty "C" dia esorina tsy ho avy amin'ireo fametrahana nomen'ny AppsFlyer azy ary Analytics. Miaraka amin'ny fifanakalozana finday maherin'ny 1.4 trillion izay voatanisa ao anaty tahiry anatiny ato anatin'ny dimy taona lasa, ary ny 98% amin'ireo fitaovana finday rehetra manerantany dia efa nahazo isa, ny DeviceRank dia maneho ny teknolojia fisorohana hosoka feno indrindra eto an-tany.
Ho fanampin'izany, ny mari-trano tsy manam-paharoa an'ny DeviceRank sy ny fianarana milina dia mamela ny tahiry sy ny algorithma hitombo, hianatra ary hampifanaraka rehefa tonga amin'ny Internet ireo fitaovana finday vaovao, voatanisa ireo fifandraisana vaovao ary mivoatra ny fomba fifandraisan'ny mpampiasa.
Tags: appsflyerdevicerankfandraisana an-tanana ny fampiharana findayfisolokiana amin'ny fampiharana findayhosoka amin'ny rindrambaiko findayfampiharana finday hosokafametrahana fampiharana finday
Adam Small Thursday, September 22, 2016 Saturday, February 13, 2021
Ampidiro: Codeless Mobile App Engagement Features
Ahoana ny fomba hamoronana doka Snapchat